Umthandazo kuSanta Helena ukuphelelwa lithemba kwaye? Bopha uthando
Umthandazo oya kwi-Helena Ukuphelelwa yithemba kwindoda kwaye ungaze uyilahle, akuhlali kude nokuba yinto yokuzingca okanye engenantsingiselo, inokuba sisicelo esinqwenelekayo, kodwa senziwe luthando kunye nemfuno yokuphinda iphindwe.
Uninzi lucinga ukuba umthandazo yinkcitho yexesha, kodwa inyani kukuba abawazi amandla anokuthi esi senzo sinawo kwaye asingqonge.
U-Helena Helena wayengumfazi njengaye nawuphi na umntu obekhe wafumana ubunzima kulo mhlaba kwiindawo ezininzi kwaye yiyo loo nto kungekho mntu ulunge ngakumbi kuye ukuba aphakamise imithandazo yethu, abo babandakanyeka kuyo intliziyo, apho sicela omnye umntu ngenqaku Umbono wokuthandana okanye wabantu abathandanayo.
1 Umthandazo oya kwi-Helena
1.1 Thandaza kwi-Helena e-Helena ukuba uphelelwe lithemba yindoda kwaye ungaze umyeke
1.2 Umthandazo kaSanta Elena ukuba acinge ngam kwaye unditsalele umnxeba
1.3 Umthandazo kuSanta Helena ukubopha uthando
2 Ngaba kufuneka ndikhanyise ikhandlela ukuze ndithandaze?
Uninzi lumazi njengaye Santa Elena okanye njengo-Elena waseConstantinople kodwa igama lakhe lokwenyani nguFlavia Julia Helena kwaye wayeyinkosikazi yomfazi waseRoma owayebhengezwe njenge-Saint of the Catholic, Orthodox and Lutheran Church.
Le ngcwele yayiye yezisa umlawuli emhlabeni owanikeza inkululeko kubantu abangamaKristu kwinto eyayileyona ntshutshiso ende yamandulo kwezenkolo embalini.
U-Elena, ukuba wagxothwa yindoda yakhe waphila ubomi obungcwele bugcwele zintlungu kunye nokubandezeleka ngenxa yothando olungazange lubekho.
Ukutshutshiswa kukaSanta Elena kuthathe iminyaka elishumi nane apho wayehlala elahliwe kwaye ebekelwe bucala ngelixa wayebona umyeni wakhe onwabile nomnye umfazi phantsi kophahla olunye.
Wayengumfel 'ukholo owaba ngumzekelo wamandla kunye noncedo kubantu abaninzi abanokuzifumana bekwimeko efanayo.
Thandaza kwi-Helena e-Helena ukuba uphelelwe lithemba yindoda kwaye ungaze umyeke
U-Helena oqaqambileyo we-Helena, oyingcwele yabathandi, ndiza kukucela ukuba undiphe ngesisa sakhe esikhulu, (igama lomntu) ungaze undiyeke, ungajongi nelinye ibhinqa, emsebenzini, esitratweni naphi na apho ndihlala ndicinga ngesiqu sam, umphefumlo womphefumlo kunye nomoya (()) yiza, kuba ndikubiza, nditshintsha Character, ndinamandla phezu kwakho.
USanta Elena, unamandla othandweni, ungamniki ukuthula kwengqondo, ukuba angazishiyi iingcinga zakhe, ukuba igama lam liyamhlupha kwaye alimshiyi yedwa, ukuba akaphindi afune enye imilebe kuphela eyam, ukuba yonke inyama inqwenele omnye afe Mfazi, kuphela nam ndiziva ndonwabile ngoba ndibophelelekile.
Ooh Elena Elena, uza kundinceda ukuba ndoyise intliziyo yakho kwakhona, kulawule ikratshi lakho kunye nomlingisi wakho, uyeke ukuyila, (...) yazi ukuba yeyam, phulukana nomonde xa kunjalo ngomnye, ukukhohlisa kunye Ithemba lisemathandweni am (()).
Ngaba uwuthandile umthandazo onamandla kaSanta Helena ukuphelelwa lithemba ngendoda kwaye ungaze umshiye?
Ukuhlala phantsi kophahla olufanayo kunye neqabane elingasiniki uzinzo kwiimvakalelo sesinye sezona ndawo zomeleleyo kunye nezona zihlala emakhaya namhlanje.
Olo lwalamano luthando kunye nenkanuko lushiye umandlalo osondeleyo wobudlelwane bube yindawo ebandayo kunye engazinzanga apho ukungaqiniseki nokungazithembi yinto eyenzeka kuyo yonke imeko yekhaya, befaka yonke into ngamandla amabi Bangcolisa indalo.
Kwezi meko apho umthandazo iba kukuphela kokusinda kwethu Kulapho imithandazo eya kwi-Santa Helena iba namandla.
Umthandazo kaSanta Elena ukuba acinge ngam kwaye unditsalele umnxeba
Ozukileyo we-Helena ozukileyo, ukuba uye eKalvari uze nezipikili ezintathu.
Enye wayinika unyana wakho uConstantine, enye wayiphosa elwandle, ukuze abakhweli babe nempilo, kwaye owesithathu uyithwale ezandleni zakho ezixabisekileyo.
Saint Elena, mna (igama lakho) ndicela undinike esi sikhonkwane sesithathu, ukuze ndikubeke entliziyweni ka (igama lomntu oyithandayo), ukuze ndingabi nalo uxolo, akukho luxolo lo gama nje ndingafikanga kuphila, Sukunditshata ndibhengeza uthando lokwenene.
Imimoya yokukhanya ekhanyisela imiphefumlo, ikhanyisela intliziyo (yegama lakho othandekayo), ukuze ahlala endikhumbula, endithanda, endinqula kwaye endinqwenela, kwaye nantoni na andinika yona, iqhutywa ngamandla akho, Saint Helena, wanga anga khoboka lothando lwam.
Uxolo nemvisiswano ayinayo ade afike azokuhlala nam, kwaye aphile nam, kuba eyintanda yam, enothando kwaye enobuhlobo. Ndithembekile kum njengenja, ilulamile njengemvana kwaye ikhawuleza njengomthunywa, ukuba (igama lomntu oyithandayo) eze kum ngokukhawuleza, ngaphandle kokufumana amandla okomzimba okanye okomoya.
Wanga umzimba wakhe, umphefumlo kunye nomoya wakhe woza kuba ndimbize kwaye ndimphefumlele kwaye ndimlawule. Logama nje engafiki ethambile kwaye enomdla, ezinikele eluthandweni lwam, isazela sakhe ngeke simnike uxolo. Ukuba ebexoka, ukuba ebengcatsha, makaxolise ngokwenza ukuba ndibandezeleke.
(Igama lentanda yakho) Yiza ngenxa yokuba ndikubize, ndikuyalela, ukuba ubuye kum ngokukhawuleza (igama lakho), ngamandla e-Helena kunye neengelo zethu zokugcina.
Ewe makube njalo, kwaye kuya kuba njalo!
Ngokholo yonke imithandazo inamandla kwaye umthandazo wokuba uSanta Elena acinge ngam kwaye unditsalele umnxeba uyafana.
Ukwenza oku kunye nayo yonke imithandazo esuka entliziyweni kuyeyona ndlela ilungileyo kuba ezo mvakalelo kunye neenkxalabo esizigcina kubunzulu bomphefumlo wethu zivelisiwe.
Mcele ukuba acinge ngam ayisiyiyo indlela yokulawula iingcinga zomnye umntu kodwa yindlela ye gcina umanyano kulwalamano.
Amandla amahle esinika kuwo emva kokuba sithandazile ngokuqinisekileyo aya kunceda ukuphucula imeko-bume esingqongileyo.
Ukucela uSanta Elena ukuba asincede ukuze loo mntu ukhethekileyo angayeki ukucinga ngathi ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba abe nesidingo sonjineli ethile nokuba kungomnxeba ngomnye wemithandazo edla ngokuthandazelwa namhlanje.
Ikhaya liqala ukugcwala ngoxolo kwaye kancinci kancinci imeko iqala ukuba yimpendulo ebesiyilindele.
Umthandazo kuSanta Helena ukubopha uthando
Owu Empress entle uSanta Elena, namhlanje ndiza kuwe ndizele lukholo kwaye ndiyathemba, ukuba undincedise ukubuyisa (igama lomntu) endikuthandayo, uyayazi ikamva nelangoku, ndiyakubongoza ukuba ubone ubomi bam, yenza ( ...) cingisisa kwaye uqaphele impazamo.
Usikelelekile Elena oMkhuluyo, ngenceba yakho engapheliyo, ndincede ndifumane isiqabu esingxamisekileyo entliziyweni yam, ukuba ndibuyise umntu endimthandayo, uyazi ukuba iimvakalelo zam zinyulu kwaye zinyanisekile, thambisa intliziyo yakho ukuze wazi ukuba uluxabisa kangakanani uthando lwam.
U-Ele Elena ongumama ongumzekelo, ungumKristu ogqibeleleyo, (…) ayingomntu onomsindo, khanyisela ingqondo yakhe, amenze ukuba aqwalasele kwakhona, ngothando yonke into inokoyiswa, kude neempembelelo ezimbi eziphazamisa ingqondo yakhe kakhulu, wayengalunganga, wemka no Oyena mntu ubonisiweyo, obuyela ekhaya (...), sikulindile.
Owu Elena ungcwele womnqamlezo, ndiyazi ukuba ungayenza yonke into, awuzukundishiya, umamele ilizwi lam, ilizwi lemithandazo yam ndicela isicelo sam.
Lo umthandazo USanta Elena ukubopha indoda uyacetyiswa kwiimeko apho omnye waba bantu babini ababandakanyekayo kulwalamano acinga ukuyeka okanye avakalise amanye amathandabuzo aqala ukwaphula iziseko eziluqilima zolwalamano luzisa ukungoneliseki, ukulwa, ukungonwabi kunye neengxabano ekhaya .
Yiyo lo nto umthandazo wokuthandabuza malunga nawo, ukuba omnye umntu ongajonganga mntu ngequbuliso, ahlala nathi kodwa engachasani nentando yakhe kodwa eqinisekile ukuba ukuhlala yeyona ndlela ilungileyo kwaye ngaloo ndlela atshintshe umbono wokuhamba ekhaya .
Ngaba kufuneka ndikhanyise ikhandlela ukuze ndithandaze?
Sincoma oko khanyisa ikhandlela emhlophe ekuqaleni okanye esiphelweni somthandazo weSanta Helena Ukuphelisa ithemba kunye nokubopha uthando.
Ikhandlela luphawu lombulelo. Sibulela le ngcwele inamandla ngalo lonke uncedo lwayo ebomini bethu,
Thandaza ngokholo oluninzi kunye nothando oluninzi.